Shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo Muqdisho loo soo wareejinayo – STAR FM SOMALIA
Ilo wareedyo muhiim ah ayaa xaqiijiyey in qorshaha shirka loogu soo wareejinayo magaalada Muqdisho uu yahay mid gabo gabo ku dhow.
Wararka ayaa intaa ku daraya in arrintan looga gol leeyahay in qaar ka mid ah beelaha reer Hiiraan lagu qanciyo inay shirka ka qeyb galaan, kadib markii ay horay u diideen inay Jowhar tagaan.
Warar aanu helnay ayaa sheegaya in maalmaha soo socda magaalada Muqdisho lagu xareyn doono ergooyin matalaya labada gobol, kuwaasoo dooranaya Madaxweynaha.
Si kastaba ha ahaatee Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa qorsheyneysa in todobaadka soo socda la ambaqaado wajiga xiga ee shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, waxaana la qorsheynayaa in la dhiso ka hor inta aan la gaarin doorashada.
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 11-08-2016
Wararkii ugu dambeeyay Shabaab oo weerar ku qaaday Degmada Afgooye